Ukuklama Isicelo Esiphelele Seselula | Martech Zone
NgoLwesine, Januwari 3, 2013 NgoLwesine, Januwari 3, 2013 Douglas Karr
Kokulandelayo umbukiso womsakazo sizobe sixoxa nge- Uhlelo lokusebenza lwe-Starbucks Mobile okuqoqe i- Umklomelo Wonyaka Womaka Wonyaka Wama-2012. Ngokubona kwami, uhlelo lokusebenza lweselula olukhulu oluvala igebe lokumaketha phakathi kokuthenga okuku-inthanethi nokusesitolo.
Izici ezenza uhlelo lokusebenza luphumelele kangaka
Ukusebenziseka - uhlelo lokusebenza lunebha yokuzula eyinhloko enzansi kanye nesikrini sasekhaya esibonisa ngokusobala izingxenye zohlelo lokusebenza ngokuya ngomsebenzi womsebenzisi. Uhlelo lokusebenza lunezikrini ezicace bha ngemfuhlumfuhlu encane kakhulu - inkulu kumuntu ohambayo noma ngeminwe enonile.
Ukucubungula Ukukhokha - uhlelo lokusebenza luhlangana ne-iOS Passport App futhi lwenze kube lula ukusetshenziselwa ukukhokha. Ngingabuye ngigcwalise i-akhawunti yami ngekhadi lesikweletu noma nge-PayPal ngqo ngaphakathi kohlelo lokusebenza ngemizuzu embalwa. Uhlelo lokusebenza lusebenzisa ikhadi lami lemiklomelo lamanje ngakho-ke bekukuhle ukuthi belibuyela emuva lihambisana nenqubo yekhadi lesandla.
imivuzo - Imivuzo ehlanganisiwe ye-iTunes enezaziso zokushaywa umoya. Lapho ngithenga amakhofi anele, nginikezwa ingoma engingayilanda ngokushesha ngokuchofoza kuyo. Ngokwengeziwe, ikhono lokunyakazisa inkomishi enezinkanyezi kulo bekungukuthinta okuhle!
Indawo Yendawo - kudrayivu yakamuva eya eFlorida, benginenkinga ngamamephu we-Apple neGoogle anikezela ngeStarbucks eseduze. Akunazinkathazo, uhlelo lokusebenza lwe-Starbucks lunikwe amandla we-geo futhi ngikwazile ukuthola njalo i-Starbucks esiseduzane ohambweni.
izipho - Ngingathumela isipho ngqo kusuka kuhlelo lokusebenza kunoma ubani nge-imeyili!
Imikhiqizo - noma ngabe iziphuzo, amakhofi noma ukudla, uhlelo lokusebenza lunikeza lonke ulwazi oludingayo kwimenyu ye-Starbucks.
izintandokazi - unamandla okusindisa iziphuzo eziyizintandokazi zomngane wakho. Lokho kumnandi njengomuntu webhizinisi ohlangana eStarbucks!
Uhlelo lokusebenza oluphelele lwe-Mobile
Yize lolu uhlelo lokusebenza olumangazayo lokushayela ithrafikhi eyengeziwe yesitolo nokuqoqa izimali zamakhadi, ngicabanga ukuthi kunezici ezithile ezingenza uhlelo lokusebenza luqine ukushayela okuningi okuku-inthanethi nokuthenga ngaphakathi:
Ukungena - Uma bengingabona i-Starbucks eduze kwami ​​futhi ngibone ukuthi abangane bami bangene yini, kungamangalisa. Ukuhlanganiswa kokungena kwe-Foursquare kungasiza kakhulu. Ngempelasonto, ngingathanda ukumane ngiphenye izitolo zakwaStarbucks ngiye kuleyo umngane ahlanganyela kuyo.
Social - Ngokumangazayo, uhlelo lokusebenza lweselula alunakho ukuhlanganiswa komphakathi ne-Facebook, i-Twitter, i-Google +, i-Foursquare, njll. Lokhu kungaba wusizo ngokukhethekile ekungeneni nasezipho. Mhlawumbe isaziso esivela ngqo ekuthengeni ngohlelo lokusebenza ukutshela abangani bami ukuthi ngikuphi ku-Starbucks!
I-Geofencing - Njengoba uhlelo lokusebenza selunemiyalezo ecindezelwayo, kungani ungenzi isipho uma ngisondela ku-Starbucks?
Ama-oda - Njengoba ngineziphuzo engizithandayo nengizithandayo engivele ngiyisethile esicelweni, ngabe sikhona ngempela isizathu sokuthi ngime emgqeni ngizihlelele kwa-Starbucks? Kungani ungaphrinti isitika khona lapho uthengisa khona iBarista engayithatha futhi isifeze! Bangamemeza nje igama bese usicosha isiphuzo sakho.
Tags: ukwakhiwa kohlelo lokusebenza lweselulaizinkanyeziuhlelo lokusebenza lweselula lwe-starbucks
Jan 10, 2013 ku-10: 29 AM
Ngingumuntu othanda i -idea- yeGeofencing - Ngifisa sengathi abathengisi abaningi bangayisebenzisa.